Ciidamada Dawladda oo si Xoog ah ku Baneeyey Xarumo kamid ah kuwa Dawladda
May 10, 2012 - jawaab	Number of View: 133Share
Muqdisho:- Ciidamada Dawladda KMG ah iyo kuwa AMISOM ayaa maanta dadkii deganaa xoog uga saaray xarumaha wasaaradaha wasaaradaha qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah iyo wasaaradda Tacliinta Sare iyo Hidaha ee magaalada Muqdisho.
Maanta barqadii ayaa Ciidamo katirsan kuwa AMISOM iyo kuwa Dawladda KMG ah waxaa lagu soo daayey waddada isku xirta Isgoysyada KM-4 iyo Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada ayaa gebi ahaanba xiray dhaq dhaqaaqa dadka iyo gaadiidka waddada, waxayna hawlgallo xoog ku saaris ah ku bilaabeen dad ku harsanaa labada xarumood ee wasaaradaha.
Dadkii deganaa wasaaradaha qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah iyo Tacliinta Sare iyo Hidaha ee maanta xoogga looga saaray ayaa ka madax adaygay baaq ay hadda ka hor dhowr mar u jeedisay Dawladda Soomaaliya.
Dadkaasi oo xarumaha deganaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay ayaa sheegay in ay xoog ku joogaan taasina waxay sababtay in maanta awood dheeraad ah loo adeegsado.
Ma jirin wax iska hor imaad ah oo dhacay balse waxaa la arkaayey qaar kamid ah dadkii deganaa guryaha oo ay xireen Ciidamada Dawladda ee saaka hawlgalka sameeyey.
Dawladda KMG ah ayaa horay xarumo badan oo kamid ahaa dhismayaasha Dawladda waxay uga saartay dadkii deganaa 20-kii sano ee lasoo dhaafay, qaar kamid ah dhismayaashaasi waxaa iminka ka socda dayactir.
Inta badan dadka Muqdisho ayaa soo dhoweeyey qorshaha ka saarista dadka ee xarumahii Dawladda maadaama lagu qaban doono shaqada wasaaradaha oo qaarkod ay hadda ku shaqeeyaan dhismayaal kiro ah.